जोन्टी रोड्सको नजरमा विश्वका उत्कृष्ट ४ फिल्डर - Everest Dainik - News from Nepal
जोन्टी रोड्सको नजरमा विश्वका उत्कृष्ट ४ फिल्डर
एजेन्सीः दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व स्टार अलराउण्डर जोन्डी रोड्स विश्वका एक महान् फिल्डरमा गनिन्छन् । उनको शानदार फिल्डीङकै कारण टोलीले कयौं पटक जीत निकालेको थियो । अहिले पनि उनको चर्चा कम छैन । हरेक खेलमा उत्कृष्ट फिल्डिङ गर्दा पहिला उनैलाई सम्झिइन्छ । र, उत्कृष्ट फिल्डरलाई रोड्सकै उपमासमेत दिइन्छ ।
याे पनि पढ्नुस कस्तो हो भारतीय क्रिकेट टिममाथि वेस्ट इन्डिजमा आक्रमणको धम्की?
यो पनिः जोन्टी रोड्स भारतीय क्रिकेट टिमको ‘फिल्डिङ कोच’ बन्ने सम्भावना
क्रिकेटबाट सन्यास लिएसँगै यी महान् क्रिकेटरले टप पाँच फिल्डर चुनेका छन् । उनलाई उत्कृष्ट लागेका फिल्डर को–को हुन्? एवी डी भिलियर्स (दक्षिण अफ्रिका), एन्ड्र सायमन्डस (अष्ट्रेलिया), कलिङवुड (इंग्ल्याण्ड) र सुरेश रैना (भारत) ।
याे पनि पढ्नुस धोनी क्रिकेट छोडेर लागेकै हुन् त राजनीतिमा? यस्तो रहेछ कारण
ट्याग्स: क्रिकेट, जोन्डी रोड्स, फिल्डर